राष्ट्रपतिज्यूको भनाइसँग सहमत हुन सकिएन - Ratopati
भारतीय पत्रकार तथा पत्रकारिताका प्राध्यापकहरूको एक टोली अहिले नेपाल भ्रमणमा आएको छ । उनीहरूले मंगलबार नेपाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग पनि भेटवार्ता गरेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । भारतीय पत्रकारहरूसँगको भेटवार्तामा राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध प्रगाढ रहेको बताउनुभयो । राष्ट्रपति भण्डारीको उक्त धारणा सुनेर आम सर्वसाधारणजस्तै पंक्तिकार पनि अचम्मित भएको छ । साथै, राष्ट्रपतिले नेपाल र भारतको पछिल्लो केही वर्षयताको सम्बन्ध कसरी प्रगाढ रहेको देख्नुभयो भनेर मलाई आश्चर्य पनि लाग्यो । केही वर्षयता नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा उतारचढाव आएको आम सर्वसाधारणलाई घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ । नेपाल र भारत छिमेकी मुलुक हुनुका साथै यी दुवैका देशका संस्कृति, धर्म, चालचलन पनि मिल्दाजुल्दा छन् । दुवै देशबीचको मैत्री सम्बन्ध पुरानो भए पनि त्यो सम्बन्धमा कहिले सुखद भने देखिएको छैन । भारतले आफूलाई जेठो दाइको रूपमा सोच्ने र नेपाललाई सानो मुलुकको दर्जा दिएर उचित व्यवहार नगर्ने मात्र होइन, नेपालको सार्वभौमिकता पनि खलल पार्ने किसिमले षड्यन्त्र गर्दै आएको कुरा कसैसामु छिपेको छैन । यद्यपि भारतको प्रधानमन्त्रीमा नरेन्द्र मोदी चुनिएपछि भारतको नेपालप्रतिको दृष्टिकोणमा सुधार आउला भन्ने नेपालीहरूले आशा गरेका थिए । मोदीले प्रधानमन्त्री भएलगत्तै छोटो अवधिमा नेपालको दुईपटक भ्रमण गर्नुले नेपाल–भारतबीच सम्बन्ध सुधारमात्र भएको ठानिएन, नेपालीहरूले मोदीलाई मनमनमा पनि राखेका थिए । तर, जब नेपालमा भूकम्प गयो र त्यसको केही महिनालगत्तै भारतले नाकाबन्दी ग¥यो, त्यसले भारतको असली रूप फेरि नेपाली सामु ल्याइदियो ।
भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेदेखि झनै तिक्ततापूर्ण बनेको द्विदेशीय सम्बन्धलाई राष्ट्रपति भण्डारीले कसरी सुदृढ रहेको देख्नुभयो, पंक्तिकारलाई अचम्म लागेको छ । भारतले नेपाली जनताले ल्याएको परिवर्तनप्रति अहिले पनि असहमति राख्दै आएको छ । राष्ट्रपतिज्यूलाई मेरो प्रश्न छ, यदि नेपाल र भारतबीच सम्बन्ध प्रगाढ भए त त्यत्रो लामो समयसम्म नेपालीहरूले नाकाबन्दी किन भोग्नुपथ्र्यो ? यो पहिलो नाकाबन्दी पनि होइन । यस्तो नाकाबन्दी भारतले पटक–पटक लगाउँदै आएको छ । यदि सम्बन्ध दुई देशबीच प्रगाढ भए किन ९० प्रतिशतभन्दा बढी संविधानसभाका सदस्यहरूले पारित गरेको संविधानको भारतले स्वागत गरेन ? नेपालको इतिहासमै पहिलोपल्ट जनप्रतिनिधिले जारी गरेको समावेशी संविधानलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले विश्वव्यापी रूपमा नेपालविरुद्ध निर्णय गराउँदै किन हिँड्नुपथ्र्यो ? सम्बन्ध प्रगाढ भइदिएको भए नेपालका पाँच दर्जन बढी स्थानमा भारतले किन सीमा अतिक्रमण गथ्र्यो ? नेपालका सबै नदीनाला भारतले किन कब्जा गर्न खोज्थ्यो ? तराई क्षेत्रलाई नेपालबाट अलग्याउन किन षड्यन्त्र हुन्थ्यो ?
त्यसकारण राष्ट्रपतिज्यूको भनाइप्रति पंक्तिकारको असहमति रहेको छ । साथै, राष्ट्रपतिज्यूको उक्त भनाइले सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपालीहरूको मन पनि दुखाएको मैले महसुस गरेको छु । राष्ट्रपतिज्यू, यदि तपाईंले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुनुपर्छ भन्नुभएको भए त्यो सही हुने थियो भन्ने मलाई लाग्छ । सम्बन्ध प्रगाढ गराउनुपर्छ भनेर पत्रकार र पत्रकारिताका प्राध्यापकहरूलाई बताउनुभएको भए राम्रो सन्देश जान्थ्यो होला । किनभने पत्रकारहरूको मार्फत नै दुवै देशका जनताले द्विदेशीय सम्बन्धबारे जानकारी पाउँछन् । उनीहरूलाई वास्तविकता अवगत गराउनाले यथार्थ जानकारीको मौका सर्वसाधारणले पाउने थिए । तर, त्यसो नगरी यस्तो कटूतापूर्ण अवस्थाको सम्बन्धलाई प्रगाढ भनेर भन्नु तपाईंको राष्ट्रपतीय हैसियतलाई सुहाउने कुरा होइन जस्तो लाग्छ । महिला राष्ट्रपतिको हैसियतबाट केही सत्यतथ्य कुरा बोल्नुहोला कि भन्ने आशा गरेकी मलाई तपाईंले निराश बनाइदिनु भएको छ । आगामी दिनमा राष्ट्रपतिज्यूले वास्तविकतालाई उद्घाटित गरेर राष्ट्रिय स्वाभिमानको पहरेदारी गर्नुहुनेछ भन्ने अपेक्षा गरेकी छु ।